पहिलो चरणमा प्रदेश-१ मा ५१ बिओपी स्थापना, कुन जिल्लामा कति? « Yo Bela
पहिलो चरणमा प्रदेश-१ मा ५१ बिओपी स्थापना, कुन जिल्लामा कति?
विराटनगर- पछिल्लो समयमा नेपाल भारतको सीमास्थित बिओपी (बोर्डर आउट पोष्ट) स्थापना भएपछि शान्ति सुरक्षामा धेरै सहज भएको छ । खुला सिमानाका कारण अनाधिकृतरूपमा नेपाल-भारत ओहोरदोहोर गर्ने मानिसको पुरानो बानीमा पनि परिवर्तन आएको बताइएको छ ।
विगतमा चौपायाको चोरी र अपराधका घटना सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको तर, अहिले बिओपी स्थापना भएपछि यी समस्या हराएर गएको सुनसरी हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । बिओपीले गर्दा नेपाली भूभागमा विगतमा हुने गरेका अपराधका घटनामा उल्लेखनीय कमी आएको जानकारी दिँदै झापा केचन कवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जरा आलमले भन्नुभयो, “बिओपीले हामीलाई रक्षा गर्नुका साथै हाम्रा धनसम्पत्तिको पनि रक्षा गरेको छ ।”
पूर्वी नेपालको भारतसँग जोडिएको इलामाका सीमावर्ती क्षेत्रमा सात बिओपी स्थापना भइसकेका सशस्त्र प्रहरी बल नं १ गण हेडक्वाटर श्रीअन्तुका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुधीरजङ्ग थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले इलामको कूल सीमा ५२ दशमलव दुई किमी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरदर एउटा बिओपीबाट अर्को बिओपीको गस्ती गर्न सात दशमलव पाँच किमी यात्रा तय गर्नुपर्ने भए पनि सीमा क्षेत्रमा पहुँच पुगेकाले कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन सचेत एवं गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले इलामको सलकपुर र समालबुङमा बिओपी स्थापना गर्न भवन निर्माणका लागि ठेक्का लागि सकेको बताउनुभयो । कालपोखरी र छब्बिसेमा बिओपी स्थापना गर्न स्थानीयवासीको सहयोगमा जग्गाप्राप्तिका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एउटा बिओपीमा अहिले सरदर २५ देखि ३५ सशस्त्र प्रहरी छन् । उहाँहरूको निगरानी र सक्रियताका कारण जनतामा आशा जागेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो ।
यस्तै, मोरङमा आइतबार मात्र तीन ठाउँमा बिओपी स्थापना गरिएको छ । ति बिओपीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै उद्घाटन गर्नुभयो । डाँगी, सुनवर्षीको सिकटी र धनपालको धनपतिमा बिओपी स्थापना भएपछि मोरङमा कूल ११ बिओपी पुगेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तीर्थराज पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले मोरङको मधुमल्ला र सोराभागमा पनि बिओपीको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिनुभयो । निकट भविष्यमा आवश्यकता भएको ठाउँमा बिओपी स्थापना हुँदै जाने उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो । मोरङको सिमानाको लम्बाइ ६३ दशमलव दुई किमी छ । यहाँको प्रत्येक बिओपीमा सरदर २५ देखि ३५ सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् ।
सुनसरीमा हालसम्ममा १० बिओपी स्थापना भइसकेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भोक्राहा गाउँपालिका र बर्जुतालको हर्मोनीस्थित बिओपी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जनाउँदै सुनसरीमा आवश्यकताअनुसार बिओपी राज्यले स्थापना गर्दै जाने बताउनुभयो । सुनसरीको कूल सिमानाको लम्बाइ ६१ दशमलव आठ किमी छ । सरदर प्रत्येक बिओपीमा २५ देखि ३५ सशस्त्र प्रहरी बसेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरीमा प्रदेश नं १ मा पहिलो चरणमा ५१ बिओपी स्थापना भइसकेका छन् । नेपाल भारतको सीमाक्षेत्र इलाममा सात, झापामा १७, मोरङमा ११ सुनसरीमा १० र चीनतर्फको सिमानाअन्तर्गत ताप्लेजुङमा एक, पाँचथरमा चार तथा सङ्खुवासभामा एक बिओपी स्थापना भइसकेको बताइएको छ । रासस